kufamba | Karmanhealthcare.com
Tag Archives: kufamba
Karman Yakazara Nongedzo yekushandisa Wiricheya
Zvakakosha zvakadii kuona kuti urikushandisa wiricheya nemazvo? Mhinduro yacho yakakosha pakushandisa wiricheya! Iwe haudi kukuvara kana kukuvara. Saka rega kutanga izvozvi. Mawiricheya ndeemhando mbiri senge manyorerwo (anozvifambisa wega) uye emagetsi (simba). Kune mamwewo macheya akakosha evana anowanikwa iwo […]